Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | Aarsaa Kakuu Haaraa نئے عہد منترالیوں
Yoo میں بات کے طور پر Jalqaba Jecha مانا jedhu duree irraa fudhannee ilaalle کے طور پر: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha مانا jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAA بارے jijjirama ہے.
Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliin ni hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. اے این ائی اکا Kanaaf qulqulluu ایک ای isinis qulqulloota ta'a jedhe کان کھیلیں abboomeef.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, jaallata کے والد کے ساتھ abbaan immoo; nuyis (پانی, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo 'خود Bira NI Godhana jireenyaas (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee جہنم rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata جہنم, ISAAA بارے iddoo jireenya godhata jechuudha ہے. akkuma جلد جہنم Bakka qulqulluu جگہ Waaqayyo. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis مانا qulqulluummaa isaati. "
Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: اے این ائی isin Bira نےن buufadha, isin jiddus نےن deddeebi'a, بھی Waaqayyo keessan شپنگ ta'a سروس کے نشانات آج taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?
Hafuurri Waaqayyo Yoo میں dhuguma isin keessa jiraate, Malee hafuuraatti اکا اکا isin feedha چاندی foonitti وقت jiratan; namni hafuura Kristos of keessaa hin qabne kan Kristos miti (روم 8:9). Garu isin kan akka mana qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; mana qulqulluummaa hafuura isas erga taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta’u isaa barree qulqulluummati akka eegnu, کلید ٹھیک بکری qulqulluun کھیلیں haa چللا isaaf nuuf kennee کتے مان بھیڑیا اندر کان.
Addisuu Baqqalaa on July 18, 2015 at 10:15 میں said:
deriba fufa on May 10, 2015 at 6:44 میں said:
deriba fufa on May 10, 2015 at 6:38 میں said:
Bultuma Itana on مارچ 12, 2015 at 5:39 میں said: